Ciidamo dheeraad ah oo la dhigay Isgoysyada magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 20 June 2015
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la kordhiyay ciidamada ammaanka ee ka qeyb qaadanaya sugida Caasimada Muqdisho, iyadoo saacadihii la soo dhaafay Ciidamo la dhigay wadooyinka iyo Isgoysyada.
Wasiirka Amniga C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidanka heegan la geliyay, si looga hortago weeraro qal qal gelin kara ammaanka, waxaana uu xusay in howl galada lagu xaqiijinayo amniga ay sii soconeyso.
“Heegan ayaa lagu jiraa sidii amniga lagu xaqiijin lahaa, bishan Ramadaan ciidamada waxay sii laba laabayaan sugida amniga, ciidamada waxaa la farayaa inay howshooda qabsadaan, lana dagaalamayaan cid kasta oo qalalaaso iyo falal dambiyeed geysanaya”ayuu yiri Wasiirka Amniga Gudaha.
Shabaab oo xalay gudaha u gashay degmada Afgooye ee Gobolka Sh/Hoose
Madaxweynihii hore ee Kenya oo Britain ka dalbaday inay taageero ka geystaan La-dagaalanka Alshabaab